ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေ ၊ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ နည်းပညာအလုပ်သင် သင်တန်းသား များစေလွှတ်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ ‹ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေ ၊ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ နည်းပညာအလုပ်သင် သင်တန်းသား များစေလွှတ်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ
နေပြည်တော် ဇူလိုင် ၆ ရက်
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA နှင့် အဖွဲ့အား	ယနေ့နံနက် ၀၉၀၀ နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ အဆိုပါ ဝန်ကြီးဌာန ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ဧည့်ခန်းမတွင်လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး မှပြောကြားရာ၌ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် အလုပ်သင်အလုပ်သမားစေလွှတ်ရေးတို့နှင့် ပတ်သက်၍ အလုပ်သမားစေလွှတ်ရေးဆောင်ရွက်မည့် မြန်မာနိုင်ငံဖက်မှ မြန်မာပြည်ပအလုပ်အကိုင် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်အေဂျင်စီများကို နှစ်နိုင်ငံသဘောတူလက်မှတ် ရေးထိုးထားသည့် သဘောတူညီချက်များအတိုင်းဥပဒေနှင့်အညီ စနစ်တကျ အမြန်ဆုံးအဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာစေလွှတ်နိုင်ရေးအတွက်ဝန်ကြီးဌာနဘက်မှလက်ရှိဆောင်ရွက်နေမှုများအားအသေးစိတ်ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးမှလည်း ဂျပန်နိုင်ငံမှ မြန်မာအလုပ်သင် အလုပ်သမားများအား အမြန်ဆုံးခေါ်ယူနိုင်ရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် အတွက် လာရောက်တွေ့ဆုံ ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံဘက်မှ အလုပ်သမားလိုအပ်မှု အခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု အခြေအနေများနှင့် ပြည်လည် လက်ခံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ သံအမတ်ကြီးမှသိရှိလိုသည်များ အားမေးမြန်းခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး တွေ့ဆုံပွဲအား ၁၀၀၀ နာရီတွင် ရုပ်သိမ်း ခဲ့ပါသည်။